नेपाली क्रिकेट टोली एमसीसीविरुद्ध लर्डसमा खेल्दै, जित्ला त आजको खेल ?
मुख्य पृष्ठखेलकुदनेपाली क्रिकेट टोली एमसीसीविरुद्ध लर्डसमा खेल्दै, जित्ला त आजको खेल ?
साउन १३, मोरङ, गत फेब्रुअरीमा जिम्बावेमा भएको विश्वकप छनोटबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेपाली क्रिकेट टोलीले आज टी–ट्वान्टी खेल्दैछ । इंग्ल्यान्डको लर्डसमा नेपालले आज (आइतबार) त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) र नेदरल्याण्ड सम्मलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न लागेको हो ।
नेपालले आज साँझ ६ः१५ बजे एमसीसीसँग खेल्नेछ । नेपाली टोलीको अर्को खेल राती १०ः३० बजे नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध हुनेछ । त्यसअघि दिउँसो ३ बजे पहिलो खेल नेदरल्याण्ड्स र एमसीसीबीचको हुनेछ ।
आज नेपालका लागि पारस खड्काले कप्तानी गर्दैछन् भने एमसीसीको कप्तानी श्रीलंकाका माहेला जयवद्र्धने गर्ने भएका छन् ।
नेपाल र नेदरल्याण्डबीचको खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिईसकेको छ । नेपालले सन् २०१५ पछि पहिलोपटक टी–ट्वान्टी खेल खेल्न लागेको हो । नेपालले सन् २०१५ को जुलाईमा टी–ट्वान्टी विश्वकप छनोटमा पपुवा न्युगिनीसँग खेलेपछि टी–ट्वान्टी अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलेको छैन ।
नेपालले लर्डसमा दोस्रो पटक खेल्न लागेको हो । नेपालले दुई वर्षअघि पहिलोपटक लर्डसमा खेलेको थियो । नेपाल र बेलायतबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध २ सय वर्ष पुगेको अवसरमा भएको एकदिवसीय खेलमा नेपालले एमसीसीलाई ४१ रनले पराजित गरेको थियो ।
त्रिकोणात्मक सिरिजपछि नेपाली टोली एकदिवसीय क्रिकेटको डेब्यु खेल खेल्न नेदरल्याण्ड जानेछन् । नेपालले एमस्ट्राडममा घरेलु टोलीसंग अगस्ट १ र ३ मा ऐतिहासिक एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्नेछ । यो खेलपछि नेपालका भेट्रान स्पिनर शक्ति गौचनले सन्यास लिनेछन् ।
एमसीसीको टिममा निक कोम्टन, इंग्ल्यान्डका पूर्व ब्याट्सम्यानहरू इयान बेल, जोनाथन ट्रोट, विकेटकिपर जेम्स फोस्टर, जिम्बावेका पिटर मुर, स्कटल्यान्डका डिलन बुज, एलास्डाएर इभान्स र मार्क वाटलगायतले खेल्नेछन् ।